စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို 1.18.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.18.3 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား ဂီတ & အသံ စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကိုတစ်ဦးအဆုံးစွန်စည် pads sampler သို့မဟုတ်သင်အေးမြစည်းချက်ဖျော်ဖြေဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောစည်စက် App ဖြစ်ပါတယ်, သွားလာရင်းဂီတနှင့်သီချင်းများပါစေ။
ဘိသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကိုနှင့်အတူအလွယ်တကူကြောက်မက်ဘွယ်စည်းချက်ကိုဖန်တီးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ရလာဒ်ကဒိစာကြည့်တိုက်ကနေထိပ်တန်းသံကိုအထုပ်ခံစားပါ။ စည် pads ကိုအသာပုတ်များနှင့်ချက်ချင်းမျိုးစုံသက်ရောက်မှုသက်ဆိုင်ပါသည်။ , ကွင်းကိုသုံးပါကသူတို့ကိုရောထွေးနှင့် Launchpad အပေါ်တကယ်ပျော်စရာတစ်ခုခုသို့သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်းတင်။ ကြယ်ငါးပွင့်ဂီတအစုံသို့မဟုတ် mixtapes အတွက်အဆိုပါစည် pads ကိုသုံးပါ။ စည် pads အတူသွားနှင့်လုပ်ဂီတအပေါ် Play နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပူးပေါင်း!
အဆိုပါရလာဒ်ကဒိစာကြည့်တိုက်ကွဲပြားခြားနားသော EDM အမျိုးအစားများအတွက်လတ်တလောအသံကထုပ်ကမ်းလှမ်း:
- က Hip-Hop နှင့်ပိုပြီး!
ဒါကြောင့်သင်ကလူကြိုက်များ EDM ထုတ်လုပ်သူများကဲ့သို့ဂီတလုပ်ဖို့လိုသလဲ
ဘိသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကိုထဲကအများဆုံးရယူပါ:
- အရည်အသွေးမြင့်နမူနာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စည် pads အပေါ်ဆက်ကပ်အပ်နှံ EDM ဂီတသမားများကလုပ်နေကြသည်။ ဤသည်မိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကို app ကိုကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်ပင်ပိုကောင်းစည်းချက်နှင့်အတူသငျသညျကိုထောက်ပံ့ပေးကူညီပေးသည်!
- ကျနော်တို့သင်သည်မည်သည့်နိုင်ရန်အတွက်ပေါင်းစပ်နိုင်သောဆိုးကျိုးများတဲ့အရေအတွက်ကအကောင်အထည်ဖော်ကြပါပြီ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း5သက်ရောက်မှုမှတက်ကိုသုံးပါနှင့် Real-time မှာသူတို့ကို configure ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစတော့ရှယ်ယာပြီ 32 pads ထဲကတစ်ဦးအထူးသဖြင့်နမူနာ pad ပါမှတစ်ခုချင်းစီကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု Send! သင်တို့သည်ဤမျှလွယ်လွယ်ကူကူအမှန်တကယ်ဒဘ်ဘတက်ပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာနိုင်သည်!
- ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားစည်းချက်ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့စည် pads အပေါ်အစည်းအဝေးများ Play ကျနော်တို့တိုင်းသံကိုဗူးနှင့်အတူပေး loops ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လိုလားတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ? ဖန်တီး4ထုံးစံကွင်းမှတက် overdub နှင့်စည် pads ပေါ်တွင်သင်၏လမ်းကြောင်းတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်ရိုက်ကူးနေစဉ် Launchpad အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်: တစ်စိန်ခေါ်မှုယူပါ။
- သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု Share - YouTube ကိုရန်သင့်ဂီတတင်ပို့သို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသညျကိုကြိုက်!
- ပုံမှန် update နှင့်အတူအခမဲ့ခေတ်မှီ EDM ထုပ်
- အရည်အသွေးမြင့်နမူနာ (compressed လုပ်မထားတဲ့ 16-bit နဲ့, 44,1 kHz)
- နှစ်ခုဘဏ်များအတွက် 32 pads
- အကွိမျမြားစှာအသံဖိုင်သက်ရောက်မှု: Distortion, နှောင့်နှေး, Equal, Flanger, Phaser နှင့်ပိုပြီး
- တက်ဘလက်ဖုန်းနှင့်5ထက်မပိုပေါ်မက်စ်4တစ်ပြိုင်နက်ဆိုးကျိုးများ
- လျှောက်ထားသက်ရောက်မှု၏ရီးရဲလ်အချိန် configuration များ
- တိုင်းသံကိုကြိုတင်အတွက် Predefined စည်းချက်ကွင်း
- မက်စ်4ထုံးစံတက်ဘလက်ဖုန်းနှင့် max ကို5ရက်နေ့တွင် loops
- အင်္ဂါရပ် Overdub မှတ်တမ်းတင်ထားသောကွင်းမှအသံများကိုထည့်သွင်းဖို့
- Built-in metronome နှင့် BPM ထိန်းချုပ်မှုကိုသင်ကောင်းကောင်းကစားကူညီရန်
- Music ကို session ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ခွဲဝေမှု
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို app ကိုအခုမှစများနှင့်ကျွမ်းကျင်ဒဘ်ဘတက်ပ်ထုတ်လုပ်သူများအဘို့အလုံလောက်အောင်အဆင့်မြင့်အဘို့အမျှမျှတတလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုပါ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်အလှန်သင်ခန်းစာ Follow နှင့်အခုအချိန်မှာအောင်စည်းချက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းကတဆင့်သွားပါ!
Gismart ဂီတနှင့်အကြောင်းအရာခပ်သိမ်းတို့အတွက်အမှန်တကယ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကျိန် ဆို. ပူဇော်ဂီတသမားများနှင့် developer များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ!
https://www.facebook.com/gismartmusic/: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
https://www.instagram.com/gismartmusic/: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram ကို၌အကြှနျုပျတို့၏ရုံးဘဝအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို အား အခ်က္ျပပါ
joenasr စတိုး 830 169.36k
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.18.3
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://gismart.com/privacy-policy/
App Name: စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို
လက်မှတ် SHA1: CB:AF:B3:D9:E4:A8:78:D5:4C:71:A1:75:03:A4:60:1E:99:FD:84:AB
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alex Minetz
အဖွဲ့အစည်း (O): Gismart
စည်းချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Go ကို APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ